10 Waxyaabood Oo Aad U Baahan Tahay Inaad Ogaato Ka Hor Inta Uusan Soo Xirmin La Liga %
In lasoo gaba gabeeyo horyaalka La Liga, ee wadanka Spain, waxaa ka harsan Sagaal kulan. Barcelona, ayaa ugu cad-cad inay ku guuleysato horyaalka, halka Real Madrid, Atletico Madrid iyo Valencia, ay u ordayaan booskooda Champions League.
Hadaba, saaxiibayaal waxaan halkaan hoose aan idin kugu soo gudbin doonaa Tobban waxyaabood kuwaasoo aad ubaahan tahay inaad ogaato ka hor inta uusan soo gaba gaboon horyaalkaan oo ah kan labaad ee dunida ugu xiisaha badan.
Afar kooxood ayaa ku hardamaya inay sii joogaan horyaalka, waana Malaga, Deportivo, Las Palmas iyo Levante, inkastoo kooxda Levante ay natiijo wacan heleyso, hadana waxaa hada ugu hooseeyaa Malaga iyo Deportivo.
Marka laga soo tago Champions League, waxaa jira tartan kale oo ay kooxuhu ku dagaalami doonaa, kaasoo ah Europa League, iyadoona kuwa loolanka adag uu dhexmarayo ay kala yihiin: Villarreal, Sevilla, Girona, Betis, Getafe, Celta iyo Eibar.
Waa meesha ugu xiisaha badan ee uu tartanka ka dhici doono, marka laga soo tago hanashada horyaalka, maxaa yeelay midkoodna ma cada midka ku dhameysan doonta waa Real Madrid iyo Atletico Madrid, inkastoo ay hada ku jirto labaad, Atletico oo 4 dhibcood sareysa.
Kooxahaan ka wada dhisan Ismaamul goboleedka Andalusian, ee wadanka Spain, ayaa waxay mid walba oo iyaga kamid ay rabtaa inay ka sareyso tan kale, iyadoona wax walba ay kala cadaan doonan marka la gaaro dhamaadka horyaalka.
Miyay Barca Hanan kartaa horyaalka?
Su’aalaha ugu badan ee leys weydiinayo ayaa waxay tahay hadii Barcelona ay ku guuleysan karto horyaalka La Liga, inkastoo ay hada ku hogaamineyso 75 dhibcood, ayna 11 dhibcood ka sareyso Atletico, hadana waxaa iska cad in horyaalku uusan wali dhamaan.
Miyay Barca guul daro la’aan qaadi kartaa horyaalka?
Bluagrana ayaa waxay hadda tahay koox aan wali laga badin kulamadii ay ka dheeshay horyaalka, kaliya labo koox ayaa horey ugu guuleystay La Liga, iyaga oo aan laga badin waana Athletic Club oo xagaagaii 1929/30 sameysay iyo Real Madrid oo 1931/32 ah.
Barca oo isha ku haysa Rikoor ay sameysay Real Sociedad
Real Sociedad ayaa waxay awood uyeelatay inay badiso 32 kulan oo xiriir ah, xili ciyaareedkii 1979/80 – Kooxda Ernesto Valverde ayaa hada waxay ujirtaa inay jabiso Iskoorkaan 32 saddex, si ay usoo bar-reyso ayna uga sara marto.
Yaa ku guuleysan doona gooldhalinta La Liga
Inkastoo, bilowgii iyo bartamihii fasal ciyaareedkan si weyn loo hadal hayey inuu Lionel Messi ku guuleysan doono, hadana muuqaal ciyaareedka Crsitiano Ronlado oo dib usoo noqday ayaa taasi beenisay – Messi 25 gool ayuu leeyahay halka Ronaldo uu 22 leeyahay.
Goolhayaha ugu fiican
Ter Stegen iyo Oblak ayaa waxay yihiin labadda ciyaaryahan ee hada ugu cad-cad inay hantaan abaalgudkaan – Shabaq-ilaaliyaha Barcelona ayaa shabaqiisa illaashaday 13 jeer, halka wiilka Atletico Madrid uu isana 14 jeer gool la’aan garoonka ka baxay.
Girona oo isha ku haysa inay sameyso taariikh cusub
Naadigaan dhawaa kasoo dalacday horyaalka heerka labaad ayaa umuuqaneysa mid ku dhameysan karta kaalinta todobaad, iyadoona Albacete kala wareegi karta Rikoor ay sameysay 1991/92, markaasoo ay badisay kooxdaan 14 kulan ay 7aad ku dhameysatay.
Messi Oo Shaaciyay Shaqsigii Uu Kala Tashtay Sii Joogida Barca Ka Hor Inta Uu Heshiis Kordhin Sameyn